မိုဘိုင်း RF ယာဉ်သစ်နှစ်စီးတွင် CP ဆက်သွယ်ရေးက Barnfind BarnOne ဖိုက်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာများကိုတပ်ဆင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နှစ်ဦးက New မိုဘိုင်း RF ယာဉ်များအတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေးသွင်းယူမှုများ Barnfind BarnOne Fiber ပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ
နှစ်ဦးက New မိုဘိုင်း RF ယာဉ်များအတွက်က CP ဆက်သွယ်ရေးသွင်းယူမှုများ Barnfind BarnOne Fiber ပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ
အားကစားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကား, တိုက်ရိုက်ဂေါက်သီးလွှမ်းခြုံများအတွက် BarnOne စနစ်များ် Fiber ပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘော
Laguna NIGUEL, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ မေလ 27, 2015 - က CP ဆက်သွယ်ရေး, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအသံလွှင့်မှုအတွက်ထုံးစံအသံနှင့်ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်တစ်ခု turnkey ပံ့ပိုးပေး, မိုဘိုင်းအသံလွှင့် client များအတွက်ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချောမွေ့ဖို့ Barnfind အမေရိကတိုက်ရဲ့ BarnOne ဘက်စုံသုံး signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းမွေးစားခဲ့သည်။ က CP ဆက်သွယ်ရေးက၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်းနှစ်ခု, အဓိကကအမေရိကန်အသံလွှင့်ကွန်ရက်များအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ဂေါက်သီးလွှမ်းခြုံများအတွက်တာဝန် RF ထုတ်လုပ်မှုကုန်တင်ကားများအတွက် BarnOne စနစ်များကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
"မိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်ကမ္ဘာမှာမှာတော့ဖိုင်ဘာဂီယာဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူကြေးနီအစားထိုးထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အသံ, ဗီဒီယို, နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဒေတာအချက်ပြအများအပြားလိုင်းများနှင့်အတူအလွန်ကြီးမားထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတဦးတည်း-to-တဦးတည်းဖိုင်ဘာပေါက်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးရှောင်ရှားရန်တစ်လမ်းလိုအပ် "Kurt Heitmann, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌက CP ဆက်သွယ်ရေးကပြောပါတယ် ။ "BarnOne နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကိုအလွန် On-တည်နေရာဘဏ်ဍာအဘို့အ setup ကို, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း simplifying, တစ်ခုတည်းဘောင်အတွင်းနှင့်တစ်ခုတည်းဖိုင်ဘာပေါ်သယ်ဆောင်ရန်နှင့် 32 အချက်ပြမှုများကိုမှတက်ပြောင်းလဲနိုင်ကြသည်။ "
က CP ဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်းနှင့်အဘို့အ optimized နှစ်ခုအသစ်ကမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, နှစ်ဦးစလုံး 53-ခြေလျင် expando RF ဖိုင်ဘာဂီယာကုန်တင်ကားအင်ဂျင်နီယာ HD ဂေါက်သီးလွှမ်းခြုံ။ နှစ်ဦးစလုံးထရပ်ကားများတွင်တစ်ခုတည်း BarnOne ပလက်ဖောင်းထိုကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပွင့်လင်းအဖြစ်ပိုကြီးတဲ့ဘဏ်ဍာအဘို့အ 14 ကင်မရာများမှချဲ့ထွင်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ, ခြောက်လ RF ကင်မရာများနှင့် 30 RF မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုအခြေခံများအတွက် signal ကိုထုတ်လွှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ ပုံမှန်ဂေါက်ကွင်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမှာတော့အားလုံး RF Mike, RF ဆိုးကျိုးများနှင့် RF ကင်မရာများ - ပြန်လာဗီဒီယိုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ - တစ်ဖိုင်ဘာအခြေခံအဆောက်အအုံကျော်ထွက်ချထားလျက်ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းဖိုင်ဘာအသုံးပြုခြင်းသည် BarnOne ယူနစ်ထို့နောက်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ဖို့ RF ထရပ်ကားထဲကကဤအချက်ပြအပေါငျးတို့သဖြန့်ဝေ။
Heitmann BarnOne ယုံကြည်စိတ်ချရ, ကြံ့ခိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်စျေးနှုန်းအချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယက "ကဆက်ပြောသည်။ လမ်းပေါ်ငါးပတ်ပြီးနောက်, BarnOne စနစ်များတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ, ငါတို့အင်ဂျင်နီယာများကသူတို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းချစ်ကြတယ်။ Plus အား, ထို BarnOne တစ်စီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ၎င်း၏ built-in စွမ်းရည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု software ကိုလင်းမြင်သာတိုင်း signal ကိုများနှင့်လမ်းကြောင်းကစီမံခန့်ခွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable routing ။ "
BarnOne နှင့်အခြား Barnfind ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.barnfindamericas.com.
အကြောင်းအရာ Barnfind အမေရိကတိုက်
Barnfind အမေရိကတိုက် နော်ဝေထုတ်လုပ်သူ Barnfind Technologies ကများအတွက်အမေရိကန်အခြေစိုက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ဖြေရှင်းချက်ကုန်ကျ-ထိရောက်သောအမှတ်မှာတုနှိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရကိုဆက်ကပ်။ Barnfind အမေရိကတိုက် , ထုတ်လွှင့်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုကိုဖြန့်ဝေခြင်းအပါအဝင်မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, အဘို့အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဆန်းသစ်, ဘက်စုံသုံး, signal ကို-ကြားနေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေး, cable ကို ဂြိုဟ်တု, OTT နှင့်တယ်လီကွန်း applications များ။ Barnfind နည်းပညာရဲ့ဆုရထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများအားလုံးအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူတွဲဖက်သုံးဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုစုဆုံများအတွက်ခေတ်မီပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများသည်များကိုပေးစွမ်းတောင်မှအများဆုံးစိန်ခေါ်မှု enviroments မှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် ruggedized နှင့်အနိမ့်စွမ်းအင်ကိုစစ်ဆင်ရေးများအတွက် optimized ။ စိမ်းလန်းတဲ့ထိရောက်မှုပိုအလိုလိုသိအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်အသိဉာဏ်ဒီဇိုင်းကရိုးရှင်းတဲ့ရှုပ်ထွေးစီမံခန့်ခွဲရန်လုပ်အံ့သောငှါစည်းဝေး။ Barnfind အမေရိကတိုက် မြောက်အမေရိက Barnfind Technologies ကများအတွက်မာစတာဖြန့်ချိသည်နှင့်လည်းပေါင်းစည်းမှု, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ပြုပြင်န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
Barnfind အမေရိကတိုက် BarnOne ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က CP ဆက်သွယ်ရေး ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-29
ယခင်: AVIWEST ​​ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း Newsgathering ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Mayweather vs. Pacquiao ၏ TV5 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ HD ကို Pre-လွှမ်းခြုံ
နောက်တစ်ခု: Netflix ၏ Neil Hunt ကအင်တာနက်ကိုအသက် (ETIA) ညီလာခံအတွင်း SMPTE Entertainment ကနည်းပညာမှာ Keynote Give မှ